Megan Leavey (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.1/10 21569 votes
Gabriela Cowperthwaite, Kara B. Still, Keegan Sacko, Martin Krauka, Stefania Velichkova, Urs Hirschbiegel
Bradley Whitford, Common, Damson Idris, Edie Falco, Kate Mara, Ramón Rodríguez, Sam Keeley, Shannon Tarbet, Tom Felton, Will Patton
မငျးသမီးခြော Kate Maraရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားသဈတဈကားကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားဟာ ခှေးခဈြတတျသူတှဆေိုရငျ ခှေးအကွောငျးရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားတှေ ကွညျ့ဖူးကွမှာပါ။ ခှေးနဲ့ သူ့သခငျတို့ရဲ့ ခဈြခငျမှုတှကေိုပွတဲ့ ဇာတျကားတှဟော နှဈတိုငျးလိုလိုထှကျရှိလာပါတယျ။ 2015မှာ Maxဆိုတဲ့ကား ထှကျခဲ့ပွီး 2017ထဲမှာလဲ A Dog’s Purposeဆိုတဲ့ ဇာတျကားတှေ ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ။ ခု 2017ထဲ ဒုတိယမွောကျ ဇာတျကားဖွဈတဲ့ Meghan Leaveyဆိုတဲ့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျကားလေးထှကျလာခဲ့ပါတယျ Meghan Leavey ဆိုတာကတော့ ကောငျမလေးတဈယောကျပါဗြာ စဈသမီးတဈယောကျပေါ့
သူဟာ USရဲ့ Marineတပျမှာ အလုပျလုပျနရေငျး Iraqမှာ တာဝနျထမျးဆောငျဖို့ ခိုငျးစခေံခဲ့ရပါတယျ ဒီလိုနဲ့အီရတျစဈမွပွေငျလဲရောကျရော Rexဆိုတဲ့ စဈခှေးလေးနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ သူနဲ့ခှေးကလေး Rexဟာ အဲ့အခြိနျကစလို့ သှားအတူလာအတူဖွဈခဲ့ကွတယျ Iraqစဈမွပွေငျပျေါက ဒဏျရာကစဈသားတှကေိုလဲ အတူတူကယျခဲ့ကွပါတယျ IMDbမှာတောငျ 7.1ရထားတဲ့ကားဖွဈပွီး box officeမှာလဲ ၁၃သနျးကြျောဝငျငှရေထားတဲ့ကားပါ မငျးသမီး Kate Maraအပွငျ Harry Potter Franchiseထဲက Tom Feltonလဲပါဝငျသရုပျဆောငျပါတယျ Movie Triviaတဈခုပွောတာကတော့ အပွငျက တဈကယျ့ Meghan Leaveyနဲ့ မငျးသမီး Kate Maraတို့ဟာ 1983ခုနှဈမှာပဲ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျတဲ့။
မင်းသမီးချော Kate Maraရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်တော်တော်များများဟာ ခွေးချစ်တတ်သူတွေဆိုရင် ခွေးအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ခွေးနဲ့ သူ့သခင်တို့ရဲ့ ချစ်ခင်မှုတွေကိုပြတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဟာ နှစ်တိုင်းလိုလိုထွက်ရှိလာပါတယ်။ 2015မှာ Maxဆိုတဲ့ကား ထွက်ခဲ့ပြီး 2017ထဲမှာလဲ A Dog’s Purposeဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခု 2017ထဲ ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Meghan Leaveyဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးထွက်လာခဲ့ပါတယ် Meghan Leavey ဆိုတာကတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါဗျာ စစ်သမီးတစ်ယောက်ပေါ့
သူဟာ USရဲ့ Marineတပ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း Iraqမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ခိုင်းစေခံခဲ့ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့အီရတ်စစ်မြေပြင်လဲရောက်ရော Rexဆိုတဲ့ စစ်ခွေးလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် သူနဲ့ခွေးကလေး Rexဟာ အဲ့အချိန်ကစလို့ သွားအတူလာအတူဖြစ်ခဲ့ကြတယ် Iraqစစ်မြေပြင်ပေါ်က ဒဏ်ရာကစစ်သားတွေကိုလဲ အတူတူကယ်ခဲ့ကြပါတယ် IMDbမှာတောင် 7.1ရထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီး box officeမှာလဲ ၁၃သန်းကျော်ဝင်ငွေရထားတဲ့ကားပါ မင်းသမီး Kate Maraအပြင် Harry Potter Franchiseထဲက Tom Feltonလဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပါတယ် Movie Triviaတစ်ခုပြောတာကတော့ အပြင်က တစ်ကယ့် Meghan Leaveyနဲ့ မင်းသမီး Kate Maraတို့ဟာ 1983ခုနှစ်မှာပဲ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
Gabriela Cowperthwaite Kara B. Still Keegan Sacko Martin Krauka Stefania Velichkova Urs Hirschbiegel
Bradley Whitford Common Damson Idris Edie Falco Kate Mara Ramón Rodríguez Sam Keeley Shannon Tarbet Tom Felton Will Patton
Option 1 server.mfile.cloud 546 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 546 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 546 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 546 MB SD (480p)
Option9storage.msubmovie.com 4.9 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 10 server.mfile.cloud 4.9 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 11 yuudrive.me 4.9 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 12 sharer.pw 4.9 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Brother of the Year (2018) 2018